राष्ट्रकवि घिमिरेलाई थप उपचारका लागि दिल्लीको मेदान्त लगियो | Hakahaki
राष्ट्रकवि घिमिरेलाई थप उपचारका लागि दिल्लीको मेदान्त लगियो
९ जेठ ०७५, काठमाडौं । धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना भएका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई थप उपचारका लागि दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पताल लगिएको छ ।
विगत केही हप्तादेखि ग्राण्डीमा उपचारका लागि भर्ना गरिए पनि आन्तरिक रक्तश्राव नरोकिएपछि उनलाई सरकारी खर्चमा दिल्ली लगिएको हो ।
राष्ट्रकवि घिमिरेको उपचारमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा डा. विवेक शर्मा, डा. अखिलेश कश्यप लगायतका डाक्टरहरुको टोली संलग्न रहेका थिए ।
राष्ट्रकवि बिरामी भएर अस्पताल भर्ना गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओली अस्पताल पुगेर उपचार बारे जानकारी लिँदै उनीसँग भेट गरेका थिए । प्रम ओलीले नै नेपालमा उपचार सम्भव नभए विदेश लगेर भएपनि उपचार गरिने र त्यसको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए ।
सेनाका मानार्थ सहायकरथी घिमिरेलाई मंगलबार प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अस्पतालमै भेटेका थिए ।